Iindaba -Isixhobo silandela izikhokelo zeshishini kwaye sime siqinile kwintengiso
Kwindlela yokusebenza kunye nesakhelo somgaqo-nkqubo wokunika umdlalo opheleleyo kwintengiso yepropathi, kuyacaca ukuba intengiso yepropathi ithatha inxaxheba kulwakhiwo loqoqosho lobunini oluxubeneyo, olunokuthi lukhuthaze ngokufanelekileyo uphuhliso lwentengiso yepropathi kunye nokuphonononga ishishini. Amanyathelo afana neentlobo ezahlukeneyo zeethagethi ezixubeneyo aneempembelelo ezibalulekileyo zokuqhuba Kukwanjalo nakwishishini lezixhobo. Ngokulandela izikhokelo zentengiso, unokufumana indawo kwaye ukhule ngcono.
Kwimeko yeshishini lezixhobo zase China kunye nezixhobo zangaphandle kunye neemitha, kukho umsantsa omkhulu kumgangatho, njl., Ukuphucula izixhobo zasekhaya Kukho iindlela ezintathu zokulandela.
Nokuba izixhobo zasekhaya kunye neemitha azikhawulezi njengophuhliso lwangaphandle kunye nentengiso, kodwa ngokusetyenziswa ngokubanzi kunye nokuphuculwa kweqonga, ishishini lezixhobo zasekhaya lifumene ukukhula okukhawulezileyo, inkqubela phambili enkulu kwimveliso nakwisicelo, kwaye ngokuthe ngcembe banesikhundla esithile embindini kwaye intengiso ephezulu. Kubonakala ekufumaniseni ngokukhawuleza, ukuchaneka kunye nokuthembeka kweemveliso, kubandakanya nokugcinwa kunye nokuhamba ngokukhawuleza.
Obu buchwephesha bongezwa ukuqinisekisa iziphumo ezingcono zabasebenzisi, ukuvumela abasebenzisi ukuba basebenzise ukusebenza okuncinci, ukugcinwa okuncinci, kunye notshintsho oluncinci. Iintsimbi inzuzo enkulu kunye nemveliso.
Kule meko, kwizixhobo zasekhaya kunye neemitha, kufuneka sinikele ingqalelo kumgangatho, abasebenzisi mabasebenzise konke okuqinisekileyo, ngokukhawuleza nangokukhuselekileyo, sisitshixo kuphuhliso lwendawo yezixhobo.
Kwangoko "isiCwangciso seShumi elinesihlanu soPhuhliso lweMinyaka emihlanu yoShishino lweziXhobo" sabhengezwa ngo-2011, kwachazwa ukuba ishishini lezixhobo lase China lisenazo iimveliso zasekhaya ezizinzileyo. Kukho umsantsa ocacileyo phakathi kwesini kunye nokuthembeka kunye neemveliso zangaphandle.
Icandelo loMphathiswa Wezenzululwazi Nobuchwephetshe laququzelela uthotho “loQeqesho loKuthembeka olukhethekileyo lwezixhobo zeSizwe eziPhambili zeNzululwazi kunye noPhuhliso lwezixhobo” ukunceda abenzi beprojekthi abaphambili ukuba bazigqibe ngcono izixhobo. Ukuthembeka kwezicelo zobunjineli ngexesha lophuhliso.
Kwisicwangciso sophuhliso "seminyaka emi-5" seshishini lezixhobo, ukubeka uzinzo phambi kokuthembeka, kukusebenza ngokugqwesileyo kweshishini lezixhobo. . Ukuzinza sisalathiso sobume besiseko sobugcisa, ke ngoko indlela eya kuphuhliso lweshishini lezixhobo lase China kukugxila kuzinzo, yeyona nto ibalulekileyo nefunekayo ekuphuhlisweni kweshishini lezixhobo.
Inkampani ekugqibeleni ithengisa itekhnoloji kuneemveliso. Ke kubaluleke ngakumbi ukujongana nokusetyenziswa kwemicimbi yezobuchwephesha. Inkampani ekugqibeleni ithengisa itekhnoloji kuneemveliso. Olu hlobo lwetekhnoloji yenkqubo iqulethwe kwitekhnoloji yokudityaniswa kwenkqubo kwizixhobo, ekwayingxaki enkulu kakhulu ejongene namashishini, kunye nenqaku lokudibana kokuyilwa kwezinto ezintsha, nokuba inokudibana nawona manqaku aphambili abasebenzisi.
Le yinkonzo yokuthengisa emva, eyisihloko esingunaphakade kwishishini lezixhobo. Isisombululo esikhawulezileyo, ukomelela kunye nokuphendula ngokukhawuleza zizikhokelo abasebenzisi abazikhethayo. Inkonzo yasemva kwentengiso isenokuba sisiphene kwiinkampani ezininzi. Impendulo ekhawulezileyo kunye nokubonakaliswa kubonisa isimilo seshishini, ukukwazi ukusombulula iingxaki ngokukhawuleza, kunye nengxaki yamandla obuchwephesha obuchaphazelekayo kwishishini.